′हिजो′ मा नफस्नुहोस्, ′आज′ लाई उत्तम बनाउनुहोस् ! | ड्रूपल
के तपाईं आफूलाई प्रायःजसो विगतका दिनहरू सम्झेर टोलाइरहेको अनि 'पुराना रमाइला दिनहरू' फेरी बाँच्न खोजिरहेको पाउनुहुन्छ ? सद्गुरू, हामीलाई स्मरण गराउँदै हुनुहुन्छ कि हाम्रो जीवनकालको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन, त्यसैले हामीले यो सुनिश्चित गर्नुपर्छ कि हाम्रो जीवनको सबैभन्दा राम्रो दिन 'आज' हो, न कि 'हिजो' ।
प्रश्नः सद्गुरु, जबजब म नयाँ मानिहरूको साथमा नयाँ ठाउँमा जान्छु, मलाई उनीहरुसँग घुलमिल हुन गाह्रो हुन्छ । म सधैँजसो विगतको बारेमा सोचिरहन्छु, ती मानिसहरूको बारेमा सोचिरहेको हुन्छु, जोसँग केही पल बिताएको थिएँ । यस्तो स्थितिमा म के गरूँ ?
सद्गुरु: कोही भविष्यको बारेमा सोचिरहेका छन्, कोही विगतको बारेमा सोचिरहेका छन्, कोही पनि यहाँ छन् जस्तो लाग्दैन ! तपाईंले अग्रजहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ । उनीहरू भन्ने गर्छन्, ″ओहो ! म स्कुलमा हुँदा...कलेजमा हुँदा... ।″ के तपाईंले यी गफहरू सुन्नुभएको छ ? उनीहरू जब स्कुल-कलेजमा थिए, तपाईं जस्तै भुतभुताइ रहन्थे । तर, अहिले जब उनीहरू आफ्नो विगतलाई हेर्छन्, आफ्नो जीवनलाई एकदमै निरस बनाएको महसुस गर्छन्, तब अचानक स्कुलको जिन्दगी गज्जबको लाग्दछ ।
ती मानिसहरू र यी मानिसहरूको बारेमा चिन्ता नगर्नुहोस् । आजको दिनलाई तपाईंको जीवनको सबैभन्दा उत्तम दिन बनाउनुहोस् ।
यदि तपाईं सधैँ विगत राम्रो थियो भनेर सोचिरहनु हुन्छ भने, यसको अर्थ हो तपाईं अहिले राम्रो गरिरहनु भएको छैन । हिजोको दिन, सबैभन्दा राम्रो दिन हुनुहुँदैन । आजको दिन, तपाईंको जीवनको सबैभन्दा उत्तम दिन हुनुपर्छ, किनकि तपाईंसँग अर्को एउटा दिनको अनुभव रहेको हुन्छ । त्यसैले के तपाईंले यसलाई सबैभन्दा उत्तम दिन बनाउनु पर्दैन ? आफ्नो जीवनलाई यस्तो बनाउनुहोस् कि तपाईंको जीवनको सबैभन्दा राम्रो दिन ′आज′ हो ।
यदि आजभन्दा हिजो राम्रो थियो भने, यसको अर्थ हो कि हामीले जीवन बाँचिरहेका छैनौँ, हामीले मृत्युसँग सम्बन्ध गाँसिरहेका छौँ । जे अहिले जीवित छ, त्यसको दाँजोमा मरिसकेको चीज उत्तम हुनु भनेको राम्रो कुरा होइन । हिजो मरिसक्यो । यदि जीवित चीजहरूभन्दा मृत चीजहरू राम्रा छन् भने, यसको अर्थ यो हो कि हामीले आफ्नो जीवनमा खासै केही गरिरहेका छैनौँ ।
ती मानिसहरू र यी मानिसहरूको बारेमा चिन्ता नगर्नुहोस् । आजको दिनलाई तपाईंको जीवनको सबैभन्दा उत्तम दिन बनाउनुहोस् । यदि तपाईं दिनको अन्त्यमा मर्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ ? ″हैन, हैन सद्‌गुरु म आज मर्दिनँ ।″ त्यस्तो कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । तपाईं र म भोलि यहाँ हुनेछौँ भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी छ र? हामी रहन चाहन्छौँ, तर यसको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन ।
अतः के यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छैन कि तपाईं आजको दिनलाई आफ्नो जीवनको सबैभन्दा राम्रो दिन बनाउनुहोस् ? यदि तपाईंले यसो गर्दै जानुभयो भने, तपाईंले देख्नुहुनेछ कि अर्को पच्चिस वर्षमा मानिसहरूले तपाईंलाई एक महान् व्यक्तिको रूपमा लिनेछन् । हरेक कोही तपाईंको छेउछाउमा रहन चाहनेछन् । पच्चिस वर्षको अनुभवले तपाईंको उत्तम दिन यति विशाल र विराट् हुनेछ कि हरके कसैले त्यसको एउटा अंश पाउन चाहनेछन् । वास्तवमा, यही हुनुपर्ने हो ।
स्वयंसेवा बारे बताउने क्रममा सद्‌गुरु हामीलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ कि यदि हामी इच्छुक भई बाँच्यौ भने, जीवनको हरेक पक्षमा स्वयंसेवक हुन सक्दछौँ । यही इच्…